Desktop ပေါ်က ဖိုင်တွေ မြန်မာစာ မပေါ်ကဖြေရှင်းနည်း ~ mgkhainghtoo
20:38 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဒါကတော့ကျွန်တော့ဘလော့ဆရာ ကိုအောင်အောင် ဘလော့ခရီးသည်ကနေမလာတာပါ...
4:11:00 AM အောင်အောင်(မကစ) NO COMMENTS
သည်တစ်ခါ တင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့..ကျွန်တော်တို့ မသိသေးသူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်..
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ ဖိုင်လေးတွေ ရေးဖွဲ့ထားတတ်ကြပါတယ်.. အဲဖိုင်လေးတွေကိုလဲ မြန်မာလို
အမည်လေးတွေ ပေးကြပါတယ်.. တခါတလေ ပြဿနာက မြန်မာလိုမပေါ်ဘဲ အတုန်းလေးတွေ ဘဲပေါ်နေတတ်တာရှိပါတယ်..အဲပြဿနာ အတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ..
အဆင့် (၁) အနေနဲ့... မိမိတို ကွန်ပျူတာ ပေါ် လွတ်ရာကနေ.. Right Click ပေးလိုက်ပါ..
အဲအခါမှာ အောက်ဆုံးက Personalize ကိုကလစ်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) အနေနဲ့.............နောက်ထပ် ဇယားတစ်ခုကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..အောက်ကပုံပါ.
အဲမှာ သေခြာ ကြည့်လိုက်ပါနော်...
ပထမဆုံး.... Window Colour ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ပါ... နောက် ဇယားလေးတစ်ခုကျလာမယ်..
ကျလာတဲ့ ဇယားလေးမှာ ဘဲ.. Item ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အနီဝိုင်းပြထားတာကနေ Iconဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
နောက် Font ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ Zawgyi-One ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါ...
သူ့နောက်မှာ အရွယ်အစားကိုလဲ ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
ပြီးတာနဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် Apply ကိုကလစ်ပါ...ခဏစောင့်ပါ ... Ok ကိုကလစ်ပါ..
ပြီးပါပြီ.. မိမိတို့ ဖိုင်လေးတွေ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ.. မြန်မာစာတိုင်းပေါ်နေပါပြီ........
အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..